Sida loo Gadzhiyev wadid aad u adag - Talooyin iyo tabaha
1 Xogta laga kala duwan Noocyada Hard Drive Ladnaansho
1.1 kabashada drive adag Dibadda
1.2 kabashada HDD
Recovery 1.6 weeraray
1.7 bixisaa Recovery
2 Ladnaansho xogta ka nidaamyada / qalabka kala duwan
Recovery 2.3 ah Barzakh,
2.5 WD My Passport-kabashada
Recovery File 2.6 WD External Hard Drive
2.8 WD Cunsurka Data Recovery
2.13 Fantom dibadda Hard Drive Data Recovery
3 Hawlgallada si uu u badbaadiyo disk adag
3.1 dayactir disk adag
3.2 drive Gadzhiyev oo adag
3.3 Ha ogolaan in drive adag
3.4 U dayactir drive adag
3.5 beddel drive adag
3.7 Isticmaalka drive adag xijaab soo kabashada
3.8 adeegyada kabashada drive adag Local
3.9 qalab Hard kabashada drive
3.10 Top software kabashada drive adag
3.11 drive Hard kabashada password
4 Ladnaansho xogta laga Mac OS
5 Dhibaatooyinka drive adag
5.1 failure drive Hard
5.2 shil baabuur Hard
5.3 Waxyeello drive adag
5.4 formatted drive adag
5.5 Ladnaansho xogta laga qaybaha xun
5.6 drive Uninitialized adag
Waa maxay cloning drive adag?
Cloning drive Hard sidoo kale loo yaqaan cloning disk waa hab ama koobi by iyaga oo intaa ku daray in file ah image ka kooban yahay mid drive ay adag tahay in kale. Geedi socodka sidoo kale la fulin karo si toos ah uga mid drive in kale laakiin habka lagu taliyey waa in la hubiyo in waxyaabaha ay marka hore ku daray file image ay u dibna file in si buuxda ay u drive kale ku adag. Waxaa jira sababo badan oo ay fuliyeen hanaanka, laakiin mid ka mid ah ugu badan oo loo isticmaalo in arrintan la xiriira ujeedada archiving ah.
Waa maxay isticmaalka cloning adag la wado?
Sababta ugu weyn ee sida lagu soo sharxay ka hor waa in la hubiyo in xogta la ilaaliyey oo loo xafidayaa si loogu isticmaalo mustaqbalka. Waxay yaraynaysaa dadaal in loo baahan yahay in la abuuro hayaan ka dibna dib u soo celinta xogta iyaga ka oo qayb ka ah qorshaha DR. Sida marka la barbar dhigo gurmad xogta Gadzhiyev oo ah drive adag ayaa waxaa sidoo kale kharash wax ku ool ah sida ku qoran yihiin guuriyeen isticmaalaya functionalities ka dhisay gudaha nidaam iyo barnaamijka xisbiga saddexaad waa dhif ah loo isticmaalo arrintan la xiriira. Ururada ee maanta waxaa ka mid ah aragtida ah in ay ka jiraan ee caalamka ay ka buuxaan dambiyo internetka iyo dhibaatooyinka la xidhiidha malwares iyo fayrusyada. The users haysta xog muhiim ah oo ku saabsan computer adag drives ay waxa lagula talinayaa inay qaataan dabeecadda ah ee cloning drive adag si ay darawallada muhiim ah oo info qaabeynta weli nabad iyo xasilooni.
Sida loo Gadzhiyev oo gaari ku adag?
Soo socda waa habka ay tahay in la raaco arrintan la xiriira si loo hubiyo in natiijada kama dambaysta ah waa in line shuruudaha isticmaala. The dadka isticmaala habkan ayaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in hannaanka saxda ah waa mid hawlyari iyo in ay ka fogaadaan wax kasta oo xogta arrintan oo gaartay taas oo ugu dambeyntii laga yaabaa inuu noqdo madax u user ee arrintan la xiriira.
Dhammaan xogta iyo macluumaadka muhiimka ah ee ku saabsan in ay drive ay adag tahay in si loo hubiyo in khasaare xogta waxaa loogu hortegi karaa in la xiriira habkan la taageeray. Waxa kale oo ka dhigaysa kabashada fudud haddii shil kasta oo dhacaa:
Drive ayaa u baahan Gadzhiyev ah waa in lagu daraa computer ugu horeysay si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
Barnaamijku wuxuu software cloning xogta markaas waa in lagu dhejiyaa meel si habka cloning leh ayaa bilaabmeysa, taas oo sidoo kale waxa loo arki karaa tallaabada muhiimka ah ee habkan:
Doorashadan ayaa waxaa ku habboon markaas oo laga soo xulay interface ah:
Isha iyo drives Ahaado ay tahay in la soo xulay. Waxaa si weyn lagu talinayaa in la isticmaalo ah drive Sata adag sida file meel si aad u hubiso in badan oo meel disk lacag la'aan ah waxaa laga heli karaa oo arin aan marnaba la soo gudboonaado marka ay timaado kaydinta:
User ayaa sidoo kale dib u eegi karaan goobaha ay si aad u hubiso in ay sax yihiin oo sax ah. Waxaa xusid mudan in halkan iyo wixii ka dambeeyey habka cloning leh ayaa bilaabmeysa oo sidaas waa la sameyn karaa sida fursadii ugu danbaysay oo ay dib u eegaan goobaha ay:
Marka habka cloning ka baxayo user markaas u baahan yahay in la hubiyo in button dhamaysto dhufto si nidaamka hasa
Shuruudaha ee cloning drive adag
Ka dib waxaa liiska falalka ay tahay in lagu sameeyo ka hor inta aadan bilaabin hanaanka cloning ah:
A gurmad xog buuxda waa in la abuuray in ay ka fogaadaan khasaare mid ka mid ah faylka wax ku wadid adag.
Cloning waa in la sameeyaa gal drive dibadda iyo drive in tani lagu formatted in ay xoreeyaan wax fayrusyada ama arrimaha la xiriira.
Wondershare Kabashada xogta
Iyadoo Wizard iyo hab Standard software sakhiray loo abuuray by Wondershare, shirkad oo lagu yaqaan tabo cusub iyo gobolka oo ka mid ah barnaamijyada software tahay in ay yihiin had iyo jeer la horumariyo si loo hubiyo in dadka isticmaala ay yihiin baxay intii suurogal ah. Waxaa sidoo kale in la xuso in hab saaxir ah oo u ogolaanaya dadka isticmaala si aad u hesho sida ugu fiican ee arrintan la xiriira oo ay si fudud u raacaya tilmaamaha barnaamijka in horay loo soo gundhig ay gudahood ah. Barnaamijku waxa uu la soo saaro ilaalinta maanka gui ie interface ka garaafyada user kaas oo u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u isticmaalaan si fudud oo saaxiibtinimo. Sidoo kale waxaa barnaamijka sidoo kale hubisaa in gobolka nidaamka tahay waxa la qaadayay u user si kabashada xogta marna waa arrin iyaga. Iyada oo kaliya hal guji xogta aan la soo kabsaday oo keliya, laakiin dadka isticmaala ay sidoo kale ka heli dhawr fursadood oo kale oo loo hubiyo in qayb oo dhan ama qayb ka mid ah la soo celiyo sida rabitaanka isticmaala.
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka External Hard Drive
Top 5 qalab Mac Hard Drive Recovery u soo celinta xog ku saabsan Mac OS X
Hagaha kama dambaysta ah si ay ugu bedesho wadid aad u adag
Sidee inuu ka soo kabsado Data dhintay ka Hard eryi
Sida loo Unformat A Hard Drive ee Windows ama Mac
Sida loo cesho ah Hard Drive
Hard Drive Recovery ee kaabta: Sidee inuu ka soo kabsado iyo kaabta Hard Drive Data
Ka External Hard Drive Bedelka Music inay iPod
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga ceeriin ah Hard Drive
Sidee si ay u haajiraan OS in New Hard Drive aan Reinstalling
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Pictures ka Hard Drive
Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray Faylal ay ka cajaladaha Hitachi Hard
Sida loo Gadzhiyev Drive adag la Hard Drive Gadzhiyev Software in Windows 8/7 / Vista / XP
> Resource > Hard Drive > Sida loo Gadzhiyev wadid aad u adag - Talooyin iyo tabaha